Shina famenon-tsakafo avo lenta Syrup famenoana milina sy mpamatsy | Higee
Ity milina famenoana fanafody ity dia ampiasaina amin'ny famenoana sy famonoana tavoahangy syrup, vita amin'ny vy tsy misy fangarony SUS304 na vy tsy miady amin'ny korontana SUS316 ho an'ilay ampahany mifandray amin'ny fitaovana, izay mifanaraka amin'ny fenitra GMP.
Masinina avo lenta ho an'ny herinaratra mandeha ho azy famenoana milina 2 amin'ny 1
Ity milina famenoana ranon-javatra ity dia mampiditra ny famenoana tavoahangy sy ny fametahana azy amin'ny monoblock iray, ary ny fizotrany roa dia tanterahina ho azy tanteraka. Izy io dia ampiasaina amin'ny famenoana ranoka na paty.
Ny milina dia azo namboarina mba ho feno amin'ny latabatra feeder, filler, capper, tavoahangy mpanangona.
● Miaraka amin'ny teoria famenoana Piston, haingana ny famenoana haingana ary avo lenta ny famaritana; ny haavon'ny famenoana dia azo ovaina.
● Mampiasà teknolojia an'i Frantsa ny masinina fanidiana, ny herinaratra avy amin'i tsela andriamby; ny fisamborana satroka dia manararaotra fisamborana indroa mba hiantohana ny fahamarinana. Ny hery mitazona dia azo ovaina, ny famonoana torque tsy tapaka dia tsy hanimba ny satrony ary ny satrony dia voaisy tombo-kase ary azo antoka.
Teo aloha: Tabilao famenoana tantely
Manaraka: Andalana milina famenoana shampoo mandeha ho azy